Zonke izinqubo zezomnotho sibe nobuhlobo, ukuhamba futhi aliziphikisi. isilinganiso kahle mutual isinyathelo ibhalansi (yakhoibrium) imele phakathi kwazo. Kodwa injongo umnotfo ukuqinisekisa ukuthi lokhu ukulinganisela ubephelezelwa umphumela kwezomnotho.
Ingxoxo magazini liyisici esiyinhloko namuhla. Umthelela kwezomnotho ngokwayo ithathwa njengendlela inhloso ngqangi emnothweni: ngenxa yobuningi yakhe ebonakalayo ukukhula, lwehlise inkinga nge antulayo, ikhambi zezinkinga kwezenhlalo kanye nezomnotho ngaphakathi nangaphandle lizwe.
Ngokuvamile, umphumela kwezomnotho kuyinto ethile ashukumisayo ukwanda ambalwa kanye ngcono qualitative kwemiphumela ukukhiqizwa kanye umkhiqizo.
Ukusetshenziswa kwaso izindlela ezilandelayo nesilinganiso:
- ekubalweni inzuzo kwezomnotho ngezithukuthuku okwedlulele umkhiqizo kazwelonke - kangakanani ke liye landa ngokuhamba kwesikhathi;
- ekubalweni yonyaka ukukhula rate futhi umkhiqizo wonyaka wonke ohlangene, noma ingeniso kazwelonke yangempela.
umphumela Economic - isakhi omuhle Dynamics emnothweni. It kunikeza umbono walokho ijubane ukuthuthukiswa izinqubo zomnotho kuleli zwe. Ukuze uthuthukise inhlalakahle umphakathi, kubalulekile ukuthi ukukhula komnotho kwaba ngokushesha kunokuba ukukhula labantu.
Ukuze ube njani umphumela kwezomnotho yakhetha ukusetshenziswa eziningana izinkomba alinganisa umthelela izinguquko izici ezithile ukukhiqizwa.
Endaweni yokuqala kuba ukusebenza lomsebenzi (isilinganiso ivolumu lendaba izindleko), kanye ephambene yayo inkomba - imikhiqizo okhandlayo. Kufakwe dolobha kahle (isilinganiso ivolumu kokukhiqiza dolobha baqashwe) nemali; umkhiqizo kwemithombo yemvelo kanye resource khudlwana. Futhi ekugcineni, isilinganiso inhlokodolobha-labour (isilinganiso kapitolozatrat ukuze zabasebenzi).
Umthelela kwezomnotho kuyinto isiqondiso esibalulekile lezomnotho. Lapha, imisebenzi elandelayo:
- ukusetshenziswa okuphelele kakhulu imithombo;
- ukuvimbela noma ekuqedeni ngeziphambeko kusukela nokusimama kwezomnotho ukuze senze le nqubo esimeme;
- Isethulo kwezithibelo bemvelo bezehlalakuhle nomnotho esimweni ukulinyazwa umphakathi.
inzuzo wezoMnotho kanye nezindleko-ukusebenza ukusiza ukuxazulula inkinga yokukhula okusimeme emnothweni yesimanje. Ukuze afeze ukuthuthukiswa yayo kobuhlungu, kubalulekile ukukhomba izindawo eziningana ukuthi uyonikwa ephephile futhi unomphela. Ngokwesibonelo, yilezi ezilandelayo:
- ukwanda kwemikhiqizo lifakazelwa, evumela ukuba uxazulule izinkinga;
- ukuthuthukiswa avumelanayo umphakathi ukuze kuvinjelwe tembangave;
- ukudalwa nemibandela olinganiselayo ukukhula komnotho , njll
Kufanele kukhunjulwe ukuthi imakethe lwamanje a ukwazi kakhulu ukuxazulula inkinga yokukhula nenhlalakahle sabantu, futhi indaba yokungathathi-ukuthuthukiswa amabhizinisi nezinkinga zezemvelo.
Engenayo alahlwayo - lena ... Inani engenayo alahlwayo. ingeniso kazwelonke alahlwayo
Gross Mkhiqizo Domestic
Ukunikeza - Ake sibone ukuthi ...
Imisuka uhlelo yemali
Uhlelo lomnotho kanye nezinhlobo indlela yokuphila nesimiso sezomnotho: izici nethebula
Kuyini i-patent kanye izimo ezidingekayo wayithola
I-Bereginja ... Izimpawu zesiSlavic nezinkolelo
Ukulungisa isiginci bass. Highlights
Leonid Margolin: Biography nemisebenzi
Probiotics futhi prebiotics: Ulwazi Basic